जेनेभा । स्वीस बैंकको नाम लिने बित्तिकै हाम्रो मनमा कालोधनको विचार उठ्छ। हालै मात्र स्वीस नेसनल बैंक (एसएनबी)ले एक आंकडा जारी गरेको छ। जसअनुसार स्वीट्जरल्यान्डको बैंकमा सबैभन्दा बढी पैसा संयुक्त अधिराज्यको रहेको देखिएको छ।......
काठमाडौं १३ असार । आईफा अवार्डका रुपमा चर्चित अवार्ड नेपालमा हुने भएको छ। इन्टरनेसनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आईफा) अवार्डको २० औं संस्करण नेपालमा हुन लागेको हो। आगामी अगस्ट अन्तिममा काठमाडौंमा हुने यस अवार्डका लागि......
काठमाडौं, ५ असार । नेपालको इतिहासमा सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। आज तोलाको ६४ हजार रुपैयाँ मुल्य कायम हुन पुगेको छ। यो मूल्य हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो। २०७५ साल फागुन ८ गते......
काठमाडौं, ४ असार । सरकारले जीटुजी प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने निर्णय गरे पनि तत्काल आउने सम्भावना न्यून देखिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतको स्वामित्वमा रहेका एमएमटीसी र एसटीसी कम्पनीले असारभित्र......
काठमाडौं, ३ असार । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट सबैभन्दा नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमश्रृंखला मध्येको ग्याल्चेन पीकलाई नयाँ पर्यटकीय प्याकेजको रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा सराकारवालाहरुले जोड दिएकाछन्। सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेकी माया गुरुङ नेतृत्वको टोलीले गत......
काठमाडौं, ३ असार । सरकारले दुई चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो दुई महिनामा मात्र साढे २० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । वैशाख र जेठ महिनामा मात्र २० अर्ब ५९ करोड ५३ लाख १३ हजार......
काठमाडौं, २ असार । प्रत्येक वर्ष घाटामै रहेको देखाउँदै आएको हायात होटलका निजी क्षेत्रतर्फका सञ्चालक राधेश्याम सर्राफ होटल बन्द गरेर नेपाल छाड्ने तयारीमा रहेको तथ्य खुलेको छ। हायात होटलमा सरकारी सेयर गायव भएको विषयमा......
काठमाडौं, ३० जेठ । सरकारले असार १ गतेदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक सवारीको भाडादरमा १२ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको छ । प्राविधिक समितिको सिफारिसमा भाडा वृद्धिको निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले......
भ्याट हटाउने बारे ‘छायाँ सरकार’को नयाँ धारणा सार्वजनिक
काठमाडौं, २९ जेठ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस नेता तथा छायँ अर्थमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीलाई ‘अप्रगतिशील’ कर प्रणालीको संज्ञा दिएका छन् । भ्याट खारेज गरेर प्रत्यक्ष कर प्रणाली......
संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यलाई ल्यापटप दिइने
काठमाडौं । संघीय संसदका ३ सय ३४ सदस्यलाई ल्यापटप दिइने भएको छ । सांसदलाई पेपरलेस बनाउन सरकारले ल्यापटप दिने भएको हो । जेठ १९ मा १ महिनाको समयावधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो ।......
पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताबापत भारतले दियो थप १ अर्ब ६० करोड
काठमाडौं । भारतले नेपालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताबापतको रकम १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह......
माथिल्लो त्रिशुली-१ मा एआईआईबी बैंकले लगानी गर्ने
काठमाडौं । २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-१ आयोजनामा एसियन पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी)ले पनि लगानी गर्ने भएको छ । चीनको नेतृत्वमा बनेको उक्त बैंको नेपाली ठूला परियोजनामा यो पहिलो लगानी हुनेछ । बैंकले माथिल्लो त्रिशुली—१......
प्रदेश-३ मा तीन नाका खोल्ने तयारी
काठमाडौं । प्रदेश नं. ३ का सचिव तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले प्रदेश सरकार नाका खोल्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । उनले प्रदेश नं ३ को सरकारले केरुङ, तातोपानी र लामाबगर नाका खोल्ने तयारी गरिरहेको......
अण्डा उत्पादक संघको विवाद उत्कृर्षमा,अध्यक्षले दिए राजीनामा
चितवन । नेपाल अण्डा उत्पादक संघको विवाद उत्कृर्षमा पुगेको छ । सौराहामा आयोजित १५ औं वाषिर्क साधारण सभामा वहुमत सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि कँडेलले आफ्नो कार्यसमिति नरहेको घोषणा गरेका हुन् । अध्यक्षको कार्यशैलीप्रति......
अर्को वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न गाह्रो हुन्छ : अर्थमन्त्री
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अर्को वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्न नसकिने बताएका छन्। संसदमा बजेट माथिको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सो कुरा बताएका हुन्। ‘पूँजीगत......
२०१९ मा नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण
काठमाडौं । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष (२०१९) मा नेपालमा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले सेवा र कृष क्षेत्रको योगदानको बलमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार द्रुत गतिमा हुन थालेको......
काठमाडौं । पशुपतिनाथ मन्दिरमा २०७५ सालसम्ममा ९ किलो ५ सय ८६ ग्राम चाँदी जम्मा भएको विवरण अध्ययन समितिले दिएको छ । पशुपतिनाथको जग्गा सम्पत्ति संरक्षण तथा गुठी जग्गा अध्ययन एवं छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदनअनुसार......
एक हप्ताभरि कुनै पनि कामदारको विदेश जाने टिकट नकाटिने
काठमाडौं । विभिन्न माग राखेर आन्दोलन घोषणा गरेका म्यानपावर व्यवसायीले विदेश जाने भिसा लागेका कामदारको टिकट काट्न बन्द गरेका छन् । अब एक हप्ताभरि कुनै पनि कामदारको विदेश जाने टिकट काटिने छैन । वैदेशिक......
३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा
काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका ३६ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नाफा कमाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा संस्थानहरुको मुनाफामा सामान्य सुधार भएको सरकारी आँकडा छ । आव २०७३/७४ मा......